Imodeli yeTesla 3 isemthethweni kwaye inokuba yeyakho ukusuka kwi- $ 35.000 | Iindaba zeGajethi
Imodeli yeTesla 3 isemthethweni kwaye inokuba yeyakho ukusuka kwi- $ 35.000
U-Elon Musk uyaqhubeka nendlela yakhe yokwenza eli hlabathi libe luhlaza ngangokunokwenzeka. Njengoko usazi kakuhle, uyi-CEO yeenkampani ezithandwayo njengeSpaceX okanye iTesla. Kwaye owokugqibela ophambili namhlanje, ukusukela Imodeli entsha yeTesla 3 yenziwe ngokusemthethweni, imoto efuna ukuzibeka kwinqanaba lokungena kwinqanaba lezithuthi zombane ngokupheleleyo.
Kwaye sithi uluhlu lokungena kuba yimodeli yokuqala yezi zinto zimbini sele zikhona zokulahla ngezantsi kwe- $ 40.000. Ukuchaneka, Imodeli yeTesla 3 iqala kwi- $ 35.000 -Amaxabiso aseYurophu aya kutyhilwa kulo nyaka ka-2017-. Kwakhona, kufuneka sikuxelele ukuba i-Tesla Model 3 iya kuba neenguqulelo ezimbini; Oko kukuthi, baya kuba nembonakalo efanayo kodwa ukuzimela kwabo kuya kwahluka. Ungafikelela kwimodeli 'esemgangathweni' okanye 'kwimodeli yeBanga eliKhulu'.
1 Imoto ekhawulezayo enokuzimela okuhle ukuba ibe ngumbane ngokupheleleyo
2 Izixhobo zeTesla 3
3 Iiphakeji zeNkulumbuso kunye nee Autopilot ziyafumaneka kwiModeli 3
4 Imoto kunye newaranti yebhetri
Imoto ekhawulezayo enokuzimela okuhle ukuba ibe ngumbane ngokupheleleyo
Ngayo nayiphi na inguqulelo uya kuba nakho ukuhamba ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-300 ngentlawulo enye. Kodwa ngaphambi kokukunika idatha yokuzimela, xelela ukuba iimodeli ezimbini ziya kuba zizithuthi ezikhawulezayo. Ngokwedatha ebonelelwe yinkampani kwinkcazo yayo, Imodeli yeTesla 3 esemgangathweni iya kuba nakho ukwenza i-0-100 km / h kwimizuzwana nje eyi-5,6 kwaye iya kuba nesantya esiphezulu se-209 km / h. Ngoku, ukuba ukhetha imodeli yebhetri yeTesla Model 3 Lon Range, inani liza kwehla liye kwimizuzwana eyi-5,1 kwaye isantya salo siya kufikelela kuma-225 km / h.
Kodwa xa uthetha ngemoto yombane, ngokuqinisekileyo uyazibuza ukuba kuya kuba yintoni ukuzimela kwezi nguqulelo zimbini. Ewe, ukuba ukhetha imodeli engama- $ 35.000, ngentlawulo epheleleyo yebhetri yayo ungahamba iikhilomitha ezingama-354. Nangona kunjalo, ukuba uthatha isigqibo sokufumana i-Tesla Model 3 Range Battery Ibanga elide-kuya kufuneka wenze i-9.000 yeedola ngaphezulu (i-44.000 yeedola iyonke) -oluhlu luya kunyuka lube ziikhilomitha ezingama-499.
Ulwazi malunga namaxesha okulayisha likwabonelelwe. Ukuba usebenzisa i-Tesla 'Supercharger', Kwimizuzu nje engama-30 uyakube uhlawule ibhetri yesithuthi ukuze ukwazi ukuhamba iikhilomitha ezingama-209. Nangona kunjalo, ukuba ungomnye wabo baya kuhlawulisa imoto kwindawo eqhelekileyo, ngeyure nganye yokutshaja uza kufumana uluhlu lweekhilomitha ezingama-48.
Izixhobo zeTesla 3
Izixhobo zeTesla Model 3 zibanzi ngokomgangatho: Uxhumano lweWiFi / LTE, iscreen se-15-intshi yokuchukumisa isikrini ukulawula yonke into. Uyakwazi ukufikelela ngaphakathi kwimoto ngaphandle kokuchukumisa iingcango- nokuba uvule okanye uvale-, ixhotywe ngeekhamera ezisi-8 kunye ne-12 sensors ze-ultrasonic ukwenzela ukuba iinkqubo zokhuseleko zisebenze ngokugqibeleleyo nangaliphi na ixesha. Uya kuba neziseko ezininzi ze-USB, iindawo ezahlukeneyo zokugcina- isiqu sayo ziikubhite ezili-15 (iilitha ezingama-424) Kwaye unokumamela irediyo ye-FM okanye nge-intanethi (umchachazo).
Ewe abalibalanga ngolawulo lwelizwi, uqhagamshelo lweBluetooth yezandla ezingenasandla okanye indawo yangaphakathi inokuhlala abantu aba-5.
Okwangoku, Zombini ezi nguqulelo unganqwenela ukuba nokongezwa okufanayo. Kubaqalayo, ipeyinti esemgangathweni imnyama; Ukuba ufuna ukuthenga enye yee-shades ezintlanu, kuya kufuneka uhlawule ngaphezulu kwe- $ 1.000. Iivili, okwangoku, zii-intshi ze-18, kodwa unokufikelela kwimodeli ye-intshi ye-19 ubhatala i-1.500 eyongezelelweyo.
Iiphakeji zeNkulumbuso kunye nee Autopilot ziyafumaneka kwiModeli 3
Kwakhona ungafikelela kwiphakheji yeNkulumbuso apho kufakelwa khona amazibuko e-USB emva kwekhabhathi; inkqubo yesandi ephezulu; iifestile ezinombala kunye nokhuseleko kwimitha yelanga kunye ne-infrared; kunye nezixhobo premium ezihlalweni kunye nemihombiso kwiiphaneli ezisecaleni zeengcango. Le phakheji iya kubiza i $ 5.000 ngaphezulu.
I-Autopilot kunye nokubanokwenzeka ukuba i-Tesla Model 3 nayo iya kuba ziiphakheji ezinganyanzelekanga. Phakathi kweephakeji ezimbini kuya kufuneka uhlawule ngaphezulu kwe- $ 8.000. Kwaye njengokuba kunjalo ngoku, lonke uphuculo luya kufunyanwa ngohlaziyo isoftwe.
Imoto kunye newaranti yebhetri
Ekugqibeleni, ndikuxelele ukuba iwaranti yeTesla Model 3 iyahluka kwisithuthi nakwibhetri yayo. Kwimeko yokuqala, uya kuba nesiqinisekiso se- Iminyaka emi-4 okanye i-50.000 yeekhilomitha (80.468 yeekhilomitha). Nangona kunjalo, iibhetri zifumana ixesha elingaphezulu. Kwinguqulelo esemgangathweni iya kuba njalo Iminyaka eyi-8 okanye i-100.000 yeekhilomitha ezihanjiweyo (iikhilomitha ezili-161.000). Ngoku, kuhlobo lweBhetri yoluhlu olude, iya kuba njalo Iminyaka eyi-8 okanye i-120.000 yeekhilomitha (i-193.000 yeekhilomitha ihanjisiwe). Kwezi meko (njengakuzo zonke iimveliso), kuya kuxhomekeka kumanani afika kwangoko ngexesha.
Njengoko u-Elon Musk watsho ngexesha lokunikezelwa, i-Tesla Model 3 iqala ukuhanjiswa ngoku. Nangona kunjalo, imodeli yeLon Range iya kuba yeyokuqala ukwenza njalo. Inguqulelo esemgangathweni iza kufika esiphelweni sonyaka kwaye njengoko besesitshilo, ngexabiso leedola ezingama-35.000, eyona yeTesla yexabiso eliphantsi kwikhathalogu. Ngaba uza kuthatha isigqibo sokuyifumana? Ngaba ungabandakanya naziphi na izinto ezongeziweyo kuhlobo lwenqaku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Imodeli yeTesla 3 isemthethweni kwaye inokuba yeyakho ukusuka kwi- $ 35.000
Ewe, into oyifunayo ngumatshini wokuhlamba!
UArturo Miguel Pukall uthe sitsho
UArturo Pukall Sanabria
Phendula kuArturo Miguel Pukall Said